टेलर Behl को हत्या
मुद्दाहरू कुख्यात अपराधीहरू
by चार्ल्स मन्टलाडो
ट्र्याजिकिक मर्डर अफ कलेज ताजमैन टेलर बहर
के टेलर बिल्ल लाई के भयो?
वर्जीनिया राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयमा रिचमन्डमा 17 वर्षीया फ्रान्सेन्ड टेलर ब्यालले आफ्नो सेन्टिमिटी कोठा सेप्टेम्बर 5, 2005 ले आफ्नो रूममेटलाई केही प्रेमीलाई आफ्नो प्रेमीसँग साथ दिए। उनले आफ्नो सेल फोन, केहि नगद, एक छात्र आईडी र उनको कार कुञ्जीहरू साथ लिइन्। उनी फेरि जिउँदो कहिल्यै देखिनन्।
दुई हप्ता पछि, उनको 1997 फोर्ड एस्कर्टले माइल र वीसीयू परिसरबाट आधा चोरी ओहियो लाइसेन्स प्लेटहरू फेला पारेको थियो।
उनको शरीर अक्टोबर7मा रिचमोनको पूर्व 75 मिटर मैदानमा इन्डेन्टमा फेला परेको थियो।
टेलर मैरी बहरको बचपन वर्ष
टेलर बिल्ल 13 अक्टोबर 1987 मा माट र जेनेट ब्याल (अहिले जेनेट पलासारा) मा जन्मिएको थियो। पाँच वर्ष सम्म, टेलरका आमाबाबुले तलाकमा थिए, र जेनेटलाई रिलायंस वायुसेना अधिकारीलाई सम्झाइयो। त्यो र उनको नयाँ पति र टेलर इङ्गल्याण्ड र बेल्जियममा बस्न थालेको थियो। टेलर छ वर्ष को उमेर देखि पहिले एक अनुभवी एयरलाइन यात्री बन्यो, युरोप र अमेरिका को बीच अविश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रीय यात्राहरु लाई 11 वर्ष को उमेर मा, टेलर को आमा मा दोबारा तलाक भयो र दोश्रो वर्जीनिया मा फर्किए।
सुन्दर, लोकप्रिय र प्रेमी
टेलर बिल्ल सुन्दर, लोकप्रिय थियो र राम्रो यात्रा भएको परिष्कृत विमान थियो। उनले 17 वर्षको उमेरमा विदेशमा 15 विभिन्न स्कूलहरूमा भाग लिन पाउँदा उनले वियना, वर्जीनियाको बेडरूम सामुदायिक वाशिंगटन, डीसीको मेडिसन हाई स्कूलबाट स्नातक गरे। वर्जीनिया आधारित वर्जीनिया कमेन्ट्रल विश्वविद्यालय (वीसीयू) ले रिचमन्डमा आफ्नो पहिलो वर्षमा भाग लिनको लागि आफ्नो अर्को जीवन साहसिक कार्यको लागि तयार पार्ने उनको आत्मनिर्भर स्वतन्त्रता विकास गर्नका लागि बाह्य उपस्थितिको विकास भयो।
जेनेट पेलासाराले टेलरले विविधताको कारणले उनको 30,000 विद्यार्थीले कलेजलाई भेट्टाउनको लागि टाउको चयन गरे। यो एक सुरक्षित छनोट जस्तो देखिन्छ, आफ्नो आमा र बुबा दुवै बाट एक घण्टा मात्र टाढा छ। अगस्त 2005 मा, 17 वर्षको उमेरमा, टेलर ब्यालले आफ्ना सामानहरू प्याक गरे, जस्तै हजारौं कलेजको विद्यार्थीहरू थिए, र उनको मुख्य घर ग्लेडिंग्स रिजर्भेसन डेर्ममा पश्चिम मुख्य सेन्टमा भएको थियो।
टेलरको इन्टरनेट व्यक्तित्व - "बिटर"
टेलर बाल्लको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष Myspace.com मा उनीहरूको सहभागिता थियो। वेबसाइट डिजाइन गरिएको छ ताकि व्यक्ति आफैले प्रोफाइल सिर्जना गर्न र सामाजिक-प्रकारको वातावरणमा अन्यसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ।
टेलर बाल्लको प्रोफाइलमा उनले 2005 को गर्मीको समयमा बनाएको टेलर बहरको प्रोफाइलमा उनले "बुटर" नाम दिए र पोस्ट गरे: "मैले भर्खरै उच्च विद्यालयबाट स्नातक गरेँ र अब म कलेजको लागि रिचमण्डमा छु। रिचमन्डमा किनकि म त्यहाँ केहि मान्छे मात्र जान्दछु। " पछि उनको प्रोफाइलमा उनले थपिन्, "कसलाई भेट्न चाहन्छु? कसैले जो दयालु हो।" टेलर नियमित रूपमा साइटमा पोस्ट गरियो र VCU मा हालसम्म जारी राखे।
टेलरले बेन फोलेलाई भेट्टाउँछन्
टेलरको आमाबाबुलाई अज्ञात, टेलरले मानिसलाई फरवरी 2005 मा भेट्टाएपछि वीसीयूलाई एक सम्भावित विद्यार्थीको भ्रमण गर्दै। तिनी एक 38 बर्षीया शौकिया फोटोग्राफर, बेन फोलेले थिए, जसले युवा कलेजको गर्लफ्रेंड डेटिङ गर्दथे। यो विश्वास छ कि टेलर र फ्वलेले एक पछि अर्को मित्रतालाई मित्रता विकास गरे र रिश्ते केहि बिन्दुमा सेक्स भयो। त्यहाँ टेलरले शारीरिक सम्बन्ध समाप्त गर्दा विवादित रिपोर्टहरू छन्, तर जब उनी VCU आइपुगे, उनीहरूको मित्रता जारी राख्यो।
सेप्टेम्बर5मा, टेलर रिटमोन फर्किए पछि वियना मा आफ्नो परिवार को भ्रमण पछि सप्ताहांत मा फर्क्यो। उनले उनको आमाबाबुलाई उनीहरूलाई थाहा भएकी उनीहरुलाई यसलाई सुरक्षित रुपमा VCU मा फिर्ता दिए। त्यसपछि उनी पुरानो प्रेमीको साथ द किल्ला कैफेमा रात बिताउँथे। पछि, टेलर उनको छातीको कोठामा फर्किए, तर तिनको रूममेट र उनको प्रेमी प्राइभेसीलाई छोडिदिए। उनको कार कुञ्जी, सेल फोन, विद्यार्थी आइडी र थोडा नगद संग, उनले स्काउटबोर्डिंग जाँदै थिए र तिनको कोठामा तीन घण्टामा फर्केर आए।
टेलर बिल्ल कहिल्यै जीवित देखिएन। यो सेप्टेम्बर7सम्म थिएन, कि टेलरको रूममेटले हराएका व्यक्तिहरूलाई VCU क्याम्पस पुलिसलाई रिपोर्ट गर्यो। सेप्टेम्बर 15 मा, रिचमन्ड पुलिस ले र एफबीआई एजेन्ट समेत 11 सदस्यीय कार्य बल गठन गरेको थियो, लापता छात्र फेला पार्नको लागि गठन गरिएको थियो।
सेप्टेम्बर 17, 2005: टेलरको कार, 1 997स्याण्ड फोर्ड एस्कर्ट, भेटिएको थियो र शान्त छिमेकी सडकमा लगभग एक माइल र क्यामसबाट आधामा पार्क गरिएको थियो।
इजाजतपत्र प्लेटहरू ओहियो प्लेटहरूमा स्विच गरिएको थियो जुन दुई महिना अघि रिचमन्डमा चोरी गरिएको थियो। इलाकाका पड़ोसीहरूले पुलिसलाई बताए कि कार त्यहाँ भएको थिएन टेलर हराइरहेको थियो।
K-9 कुकले कारमा दुईवटा फरक स्क्यानहरू उठायो। एक टेलर र अर्को 22 वर्षीया जेसी स्केल्टज थियो। पुलिसको प्रश्न सोध्दा, स्कल्टजले टेलरको ज्ञानलाई इन्कार गरे र उनीहरूको कारमा कहिल्यै इन्कार गरे। प्रहरीले औषधि पत्ता लगाएपछि तिनको घर खोज्दा पक्राउ परेका थिए।
सेप्टेम्बर 21, 2005 मा: प्रहरीले बताएको छ कि 38 वर्षीय बेन फुले अन्तिम ज्ञात व्यक्ति मध्ये एक थिए जसले टेलरलाई जीवित बनाएको थियो। फ्वालीले पुलिसलाई बताए कि टेलरले स्केटबोर्ड उधारेको थियो र उनले 9:30 बजे वरिपरी घुम्न गएकी थिईन उनीहरूको घरको प्रहरी खोजीमा प्रहरीले बाल पोर्नोग्राफी फेला पारे र 16 बाल अश्लील साहित्यमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। फौली, दुई केटीको एक बुबालाई सुम्पिएको थियो र उनीहरूलाई बन्धनमा बाँध्न आदेश दिए।
5 अक्टोबर, 2005 मा: फ्वालीको पूर्व-प्रेमिकाले पुलिसलाई घर फर्केर घर फर्केर घर फर्के। स्थान उनको आमाबाबुको सम्पत्तिमा भएको पुरानो खेत थियो। प्रहरीले रिमोट मैथ्यू काउन्टी खेतीको खोजी गर्यो र टेलर बिल्ल को निर्दोष शरीर पत्ता लगाएको छ।
टेलर बिल्ललाई अक्टोबर 14 मा दर्ता गरिएको थियो, 18 दिनपछि उनले 18 दिन बिताए।
बेन फोलेले दोस्रो-अर्की हत्याको आरोप लगाए
फेब्रुअरी, 2006 बेन फ्वाले टेलर बाल्ल को दोस्रो स्तरीय हत्याको आरोप लगाएको थियो। अगस्टमा उनलाई 30 वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो, जसको कारणले गर्दा एल्फोर्ड अदालतमा प्रवेश गरे, जसको मतलब उनले अपराध स्वीकार गरेनन्, तर तथ्य स्वीकार गरे कि अभियुक्तहरूले उनलाई अपराधको दोषी ठहराउन पर्याप्त प्रमाण दिए।
डिएन डाउन्सको प्रोफाइल
लिनेट ऐलिस 'स्क्की' बाटमे
के अल्बर्ट डीसोलो थियो बोस्टन स्ट्रंगलर?
माफिया मग शट
चाई वांग विस्कॉन्सिन शिकार दुर्घटनामा6हङकङलाई मारे
जर्जिया - अपराध बलिदानहरूको अधिकार
किशोर पैराकेड को मनोविज्ञान
अपडेट: होली बोबो प्रकरण
मिसिसिपी बर्निंग प्रकरण
अन्तिम शब्दहरू प्रसिद्ध अपराधीहरूद्वारा बोल्दै
लापता व्यक्ति: क्रिस्टीना मोरिस
कसले पाएको थियो?
नर्मन रकवेलको जीवनी
चिसो मौसम मत्स्य पालनको लागि ठीकसँग ड्रेस गर्नुहोस्
ग्यालियम धारण हृदय प्रदर्शन कसरी गर्ने
लोकप्रिय नयाँ वर्षको परम्पराहरूको इतिहास
क्रैक कोकीन तथ्यहरू
यो सजिलो कदमको साथ कसरी कन्जुगेट 'एसिस्ट' (सहायक गर्न) जान्नुहोस्
पढ्ने कोलोज कसरी सिक्न सजिलो गर्न सकिन्छ
5 स्कूललाई ​​गर्व गर्न प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम
20 सामान्यतया भ्रमित शब्द शब्द
पछाडी पछाडि परेपछि उनले रसियन स्लार्सको प्रयोग गरेपछि, प्युला डेनले भुटानलाई अनलाइन बनाएका थिए
चित्रकारी आधारभूत आकारहरू: एक क्षेत्र
दस आज्ञाहरूमा न्यायालय निर्णय
अलबामा विद्यार्थीहरू, K-12 को लागि पब्लिक स्कूलहरू नि: शुल्क सूची
विज्ञान मेला प्रोजेक्टको लागि बाइबिलोग्राफी कसरी लेख्नुहुन्छ
जल हाइड्रेशन परिभाषा
गेले किंग जीवनी
RCYBP - वर्तमान भन्दा रेडियो कार्बन वर्षहरू
माइकल जैक्सन गिटारवादकहरू
एम्बर फ्रीी, एक्जिट स्कूटर पीटरसनको पूर्व-मालकिनको प्रोफाइल
लेक्सिस परिभाषा र उदाहरणहरू
यूरोपमा ब्ल्याक मृत्युको आगमन र प्रसार
डच ईस्ट इंडिया कम्पनी
व्हिलिंग उद्योग उत्पादन गरिएको तेल, मोमबत्तीहरू, र घरेलू उपकरणहरू
ट्रिनिटी कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
क्यारियर स्पॉटलाइट: प्रहरी अधिकारी
कसरी कन्जुगेट "क्रिसर" (फोल्ड, क्रस, पास, भर मा कट)
अब्राहाम लिंकन प्रिन्सबल्स